​के तपाई स्मार्टफोनको प्रयोग धेरै गर्नुहुन्छ ? सावधान !
​के तपाई स्मार्टफोनको प्रयोग धेरै गर्नुहुन्छ ? सावधान !
मङ्गलबार २४, पुष २०७५
स्मार्टफोन हाम्रो जीवनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । बालकदेखि वृद्ध सम्पूर्णको हातमा अहिले स्मार्टफोन हुने गर्दछ । स्मार्टफोनलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने धेरै काम असम्भव हुन्छन् ।
तर, स्मार्टफोनको प्रयोग कति गर्ने ? यो चाही महत्वपूर्ण हुन आउँछ । पछिल्लो समय थुप्रै युवाहरुले आफ्नो अधिकांश समय स्मार्टफोनमा बिताउने गरेका छन् ।
यसरी निरन्तर स्मार्ट फोनको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धि थुप्रै समस्याहरु देखा पर्छन् । यसको विकिरणहरुले मस्तिष्कलाई कमजोर बनाउने थुप्रै तथ्य सार्वजनिक भईसकेका छन् । यसकै कारण शरिरका कतिपय भाग दुख्ने समस्या पनि हुन्छ । जस्तैः
लामो समयसम्म स्मार्ट फोनको प्रयोग गर्दा हातका औँला दुख्ने समस्या बढ्दै जान्छ । यसले औँलाको आकार बिग्रनुका साथै कमजोर भएर जाने गर्छ ।
लाामो समयसम्म स्मार्टफोनको प्रयोग गर्दा देखिने अर्को समस्या भनेको आँखाको दुखाई पनि हो । त्यसमात्र नभएर यसले आँखा पोल्नेदेखि यससम्बन्धि अन्य थुप्रै समस्या देखा पर्दै जान्छ । यसले आँखाको सुख्खापनालाई पनि बढाएर लैजाने गर्छ ।
लामो समय स्मार्टफोनको प्रयोग गर्दा गर्धनमा दुखाई हुनु सामान्य हो । त्यसैले, लामोसमयसम्म एउटै पोजिशनमा बसेर स्मार्टफोन चलाउनु घातक सावित हुन्छ ।
बसेर लगतार स्मार्टफोनको प्रयोग गर्दा पीठ्युमा जोर पर्न जान्छ । जसले दुखाईको अवस्था सृजना गर्छ । यसबाट बच्नको लागि शारिरिक रुपमा शक्रिय हुन पनि आवश्यक छ । दैनिक व्यायामको साहारा लिदा यस्तो दुखाई बिस्तारै कम हुँदै जाने गर्छ ।
हातमा स्मार्टफोन लिएर लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा काँधको भाग खिचिएर जाने गर्छ । जुन बिस्तारै दुखाईमा परिवर्तन हुँदै जान्छ । स्मार्टफोनले सृजना गर्ने यस्तो समस्याबाट बच्नको लागि बीच बीचमा ब्रेक लिनु अतिआवश्यक हुन्छ ।